ညစ်ညမ်းသောအတွေးအခေါ်များ (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောအသံဖြစ်သည်
ညစ်ညမ်း Thoughts (2018)
1) porn စွဲထောက်ပံ့ပေးလေ့လာရေး, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ။
2) မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများကိုဝေဖန်ခြင်း၊ ဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း debunking
အပိုင်း ၁– ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
ပထမဦးစွာကျွန်တော် YBOP ဖြင့်တောင်းဆိုမှုများအတှကျထောကျပံ့ပေးလေ့လာမှုများ၏စာရင်းရှိသည်။ (ကြည့်ရှုပါ မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများအတွက်) ။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 42 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 21 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 35 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 30 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး6လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 60 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်. အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 25 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်များထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 စာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။
အဘယ်အရာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကောအသို့နည်း နောက်ထပ် Meta-analysis သည်: အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2015)။ ကောက်နုတ်ချက်:
22 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ7လေ့လာမှုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတို့တွင်အများနှင့် Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်နိုင်ငံတကာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျူးကျော်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသင်းအဖွဲ့များ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ထက်နှုတ်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ၏ယေဘုယျပုံစံအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပိုမိုဆိုးဝါးအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြု.
"? ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချမထားပါဘူး" ဘယ်သူမျှမက, မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားမကြာသေးမီနှစ်များတွင်မြင့်တက်ပြီ: "မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု။ "
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 230 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)။ နိဂုံးမှ:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူလူငယ်လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တွေ့ရှိချက်များထဲတွင်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏အဆင့်မြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီ ... ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏တိုးချဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူအကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ဖော်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ အဆိုပါစာပေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Self-အယူအဆ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအကြားအချို့ဆက်စပ်မှုညွှန်ပြပါဘူး။ ယောက်ျားလေးများသူတို့အဖြစ် virile သို့မဟုတ်ဤမီဒီယာအတွက်ယောက်ျားအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုကွောကျရှံ့နေချိန်တွင်မိန်းကလေးများ, သူတို့ကညစ်ညမ်းပစ္စည်းအတွက်ရှုမြင်မိန်းမများမှကိုယ်ထိလက်ရောက်ယုတ်ညံ့ခံစားသတင်းပို့ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်းတို့၏ Self-ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးအဖြစ်လျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ထို့အပြင်သုတေသန, အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။
အားလုံးလေ့လာမှုများဆက်စပ်မှုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော Nope: အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော် ဖြစ်စေတဲ့ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို.
အင်တာနက် porn စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းဆိုသည်မှာစွဲလမ်းမှုယန္တရားများကိုနားလည်သည်။ စွဲအားလုံးသည်တူညီသောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအဓိက neurocircuitry (သိမ်းဆည်းမှုတစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း) ပြန်ပေးဆွဲသည် အပိုဆောင်း စွဲလမ်းမှုကိုအကြားကွဲပြားခြားနားကြောင်းအာရုံကြောဆားကစ်နှင့် neurochemicals) ။
မကြာမီကသုတေသနကြောင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်း (ထုတ်ဖော်ပြသအစားအသောက်စွဲလမ်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်း, အင်တာနက်စွဲ နှင့် porn စွဲ) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောများစွာကိုဝေမျှ အခြေခံယန္တရား တစ် ဦး မှ ဦး ဆောင် shared ပွောငျးလဲ၏စုဆောင်းခြင်း ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒ၌တည်၏။
မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပြီးသားဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားစီးနိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆယ်လူလာ function ကိုပွောငျးလဲအဆိုပါတိကျတဲ့လမ်းက၎င်း၏ "လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား" ဟုခေါ်သည်။ ထဲမှာ dopamine ၏မြင့်: အလားအလာလုပ်ဆောင်ချက်စွဲရှယ်ယာများထဲမှအရေးကြီးသောယန္တရားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအားလုံးမူးယစ်ဆေးနှင့်အပြုအမူ နျူကလိယ accumbens (မကြာခဏဆုလာဘ်စင်တာဟုခေါ်တွင်) ။ နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံတိုးတက်မှု၏အလင်းထဲမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစွဲမော်ဒယ်များ၏ဝေဖန်မှုများအခြေအမြစ်မရှိနှင့်ခေတ်မမီတော့ရှိပါတယ် (မရှိလေ့လာမှုများ porn စွဲမော်ဒယ်တွင်မှအမှားရှိသေး) ။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစာပေနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များသည်ဤအနေအထားကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည်။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ US ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့် Gary Wilson တို့ပါ ၀ င်ပြီး၊ ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ထုတ်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကဖော်ပြသည်။ Gary Wilson မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒုတိယစာတမ်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016) ဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက်။
နှစ်ခုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအားဖြင့်ဒီ 2015 စက္ကူကိုကြည့်ပါ: တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ ကနေဇယား ကြောင်းတိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာသူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းကားအညွှန်းပေးထားပါတယ်။
အင်တာနက်စွဲခွဲအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. neuroscience စာပေ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူတွေ့ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)။ ဤသုံးသပ်ချက် "porn စွဲ debunked ရှိသည်ဟုဆီကအရာနှစ်ခုမကြာသေးမီဆိုးသွမ်း EEG လေ့လာမှုများ critiques ။ (ကြည့်ရှုပါ ဒီစာမျက်နှာ ဝေဖန်မှုများနှင့်မြင့်မားမေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်)
ဘာစွဲ (2015) ကောက်နှုတ်ချက်: မကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေမှာတော့ဘာစွဲအင်တာနက်စွဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားစဉ်းစားသည်။ တချို့ကလက်ရှိလေ့လာမှုများကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားမျဉ်းပြိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာဘာစွဲနေတဲ့အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍမှထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ Neuroimaging လေ့လာမှုများကျဘာစွဲနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ဥစ္စာမှီခိုအကြားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆင်တူရိုးမှား၏ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
တစ်ဦးကအတိုပြန်လည်သုံးသပ် - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016) - အရာကောက်ချက်ချ: "CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီပေးထား, စှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်တိုက်ရိုက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်လိမ့်မည်။ "
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) ၏တစ်ဦးက 2016 ပြန်လည်သုံးသပ် - တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော (2016) ": - ကောက်ချက်ချထပ် features တွေ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတည်ရှိနေ။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြ။ " မှတ်ချက်: "လိင်စွဲလမ်း" ၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့သည့် neuroscience အများစုအမှန်တကယ် porn အသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်ဘဲလိင်စွဲအပေါ်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ Conflating စက္ကူအားနည်းနေခြင်း။
တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ (2016) ။ ကောက်နှုတ်ချက်: "ဤအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးအင်တာနက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လိုအပ်ပါသည်။"နှင့်"ကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးယုံကြည်လက်ခံရပါမည်။ "
ဟူသောဝေါဟာရကို "hypersexuality" စွန့်ပစ်ရပါမည်နေစဉ်, ဒီမက်စ် Planck အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ပါသည် Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016)။ ကောက်နုတ်ချက်: "အတူတူယူအထောက်အထားဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ် hypersexuality ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမြားတှငျပွောငျးလဲ, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့်ဦးနှောက်ဒေသများကြောင်းဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ်သည့် dopaminergic စနစ်၏တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာထောက်ပြတာပါ။"
ရွှံ့ရေထဲမှာရှင်းလင်းပြတ်သားရှာဖွေခြင်း: တစ်ခုစွဲ (2016) အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခွဲခြားများအတွက်အနာဂတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား - ကောက်နှုတ်ချက်: ကျနော်တို့မကြာသေးမီက non-ပစ္စည်းဥစ္စာ (အပြုအမူ) စွဲလမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထားဆင်ခြင်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ် CSB ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတူလက်တွေ့ neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင် shared ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး DSM-5 ထံမှ hypersexual ရောဂါပယ်ချခဲ့ပေမယ့်, CSB (အလွန်အကျွံလိင် drive ကို) ၏ရောဂါ ICD-10 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ CSB လည်း ICD-11 နေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစား: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-execution model (2016) ၏တစ်ဦး Interaction - "အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ" အပါအဝင်သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံသည့်ယန္တယား၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အဆိုပါစာရေးဆရာညစ်ညမ်းစွဲ (နှင့်ကျဘာစွဲ) အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအဖြစ်ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အောက်မှာအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူထားရှိစေခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
စွဲ၏ Neurobiology, အောက်စ်ဖို့ Press မှ (2016) မှလိင်စွဲလမ်းမျြးအခနျးကွီး - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: ကျနော်တို့ကသဘာဝသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစွဲအပါအဝင်စွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ, ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ပြီးတော့ဒီတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအတွက် function "စီမံထားခြင်းမရှိသော" ဖွစျလာနိုငျတဲ့သဘာဝအဆုလာဘ်အဖြစ်လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုတို့နဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုဆွေးနွေးပါ။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဖို့ Neuroscientific သို့ချဉ်း ကပ်. (2017) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း, neuroscientific ချဉ်းကပ်မှု, အထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့အတော်ကြာလေ့လာမှုများ, စမ်းသပ်အခြေအနေများနှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အောက်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏အာရုံကြောဆက်စပ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ယခင်ရလဒ်များကပေးသော, အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြီးသားပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံ neurobiological ယန္တရားများလူသိများဖို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့သုတေသီများတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားမကြာသေးမီဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်နှင့် Clinician အတှကျအကြိုးရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ခံစားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီရောဂါကြောင့်ထိခိုက်။
အဆိုပါ Pudding ၏သက်သေပြချက်အရသာအတွက် Is: ဒေတာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) Compulsive မှ & Models နှင့်ယူဆချက်ဆက်စပ်စုံစမ်းဖို့လိုအပျနသေ - ကောက်နှုတ်ချက်: CSB နှင့်စွဲလမ်းမမှန်အကြားတူညီအကြံပြုစေခြင်းငှါ၎င်း domains များအကြားဝေါ်လ်တန် et al အားဖြင့်ချန်လှပ်အများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, neuroimaging နေကြသည်။ (2017) ။ ကန ဦး လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ CSB ကိုမကြာခဏဆန်းစစ်လေ့ရှိသည် (Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်) 2016b; Kraus, Voon & Potenza, 2016b).
အဆိုပါ ICD-11 (ထဲမှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပညာရေးဆိုင်ရာ, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်Kraus et al။ , 2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: အခြားမော်ဒယ်များအဆိုပြုထားပြီအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြားလက်ရှိအဆိုပြုလွှာ (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာ (ရှိပါတယ်Kraus et al ။ , 2016), ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတိုးမြှင့် reactivity ကိုညွှန်ပြမကြာသေးမီဒေတာအပါအဝင် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014 ။
လူသားတွေဟာနှင့် Preclinical & Models (2018) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - ကောက်နှုတ်ချက်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကျယ်ပြန့် ", အမူအကျင့်စွဲ" ဟုအဖြစ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီသုံးသပ်ချက်အမူအကျင့်များနှင့် neuroimaging လူ့ CSB အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ comorbidity အကျဉ်းချုံး။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ CSB အပြင် amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားရန်, dorsal anterior cingulate နှင့် prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် thalamus အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: အမူအကျင့်စွဲလမ်းများအနက်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုမကြာခဏမကြာခဏနှစ်ခုဖြစ်ရပ်အကြားမျှနှင့်နယ်နိမိတ်နှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်ကိုးကားထားပါသည်။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများကဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏အမည်မဖော်, တတ်နိုင်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖို့ဆွဲဆောင်ကြသည်နှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ယင်း၏အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကျဘာစွဲမှတဆင့်အသုံးပြုသူများကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဤကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများလိင်၏ "ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်" အခန်းကဏ္ဍကိုမေ့လျော့ဖို့ပိုများပါတယ်, ရှာတွေ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှား။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: နေ့စွဲစေရန်, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အများဆုံး neuroimaging သုတေသနထပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြေခံယန္တရားနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲအထောက်အထားပေးအပ်ထားပါတယ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းဥစ္စာ, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနဲ့တူပုံစံများအတွက် sensitive ကလေ့, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ dyscontrol နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ကွန်ရက်များအတွက်ပြောင်းလဲလည်ပတ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ CSB features တွေချိတ်ဆက် Key ကိုဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်တိုကျရိုကျနှင့်ယာယီ cortical, amygdala နှင့် striatum, ပါဝင်သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: မကြာမီက neurobiological လေ့လာမှုများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ CSBD ၏အနည်းငယ် neurobiological လေ့လာမှုများယနေ့အထိကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒေတာထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားဖြည့်စွက်အတူ neurobiological မူမမှန်ရှယ်ယာ Community အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိဒေတာသည်၎င်း၏ခွဲခြားတဲ့အမူအကျင့်စွဲထက်တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Ventral Striatal reactivity (2018) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: လက်ရှိရရှိနိုင်လေ့လာမှုများတွေထဲမှာကျနော်တို့ကိုးစာပမြေား (ဇယားကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ် 1) အရာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုသွားမည်။ ဤအရာလေး (သာ36-39) တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ventral striatum Active နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သုံးလေ့လာမှုများ (ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တိုးမြှင့ ventral striatal reactivity ကိုညွှန်ပြ36-39) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းတွေကို (36-39) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယ့ Salience သီအိုရီ (IST) (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ28), စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖော်ပြအထင်ရှားဆုံးမူဘောင်တွေထဲက။
အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအတော်များများထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် psychosexual မကျေနပ်မှုအဖြစ်အရေးကြီးသောလက်တွေ့သရုပ်နဲ့စွဲအတိုင်းဤ entity ထောက်ခံပါတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အများစုမှာဆက်လက်စားသုံးမှုမှတဆင့်အနေနဲ့စွဲလမ်းရောဂါဖြစ်နိုင်ဟုနိုငျကွောငျး, တစ်ကယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့ '' supranormal နှိုးဆွ '' အဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲပေါ်တွင်ပြုသောအမှုအလားတူသုတေသနအပေါ်ချွတ်အခြေခံသည်။
ယခုနှစ်ထုတ်ဝေဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်လေးကိုအဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်"စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ"။ အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ကဒါဟာမှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ် (NIAAA) ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koobမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Institute ၏, ထိုညွှန်ကြားရေးမှူး (NIDA) Nora ဃ Volkowစွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားပါတယ်မသာ, သောကြောင့်လည်းလိင်စွဲရှိကွောငျးက၎င်း၏အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာဒီလိုဖော်ပြထား:
"ကျနော်တို့က neuroscience စွဲ၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆက်လက်ကောက်ချက်ချ။ ဤဒေသရှိ neuroscience သုတေသနပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အစားအစာမှဆက်စပ်အပြုအမူစှဲ (ဥပမာများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းမသာ, လိင်နှင့်လောင်းကစားဝိုင်း) ... ။ "
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအားအာရုံကြောသိပ္ပံကိုအခြေခံသည့်လေ့လာမှု ၃ ဒါဇင်ကျော်ရှိသည်:
အသိ (cue-reactivity & cravings) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ရှာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ (သို့) သတိများကိုအလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ဤရလဒ်သည် နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn အဘို့မတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်။ တချို့က ': porn တစ်ဦးတည်းသာလွတ်မြောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်' 'အဖြစ်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအလုအယက်, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်ပင်တုန်လှုပ်, သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးပြွန် site ကိုပေါ်သို့ logging ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Desensitization (အကျိုးခံစားခွင့်လျှော့ချနိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်မှုလျော့နည်းလာခြင်း) - ၎င်းတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီမှထွက်ခွာသွားသောရေရှည်ဓာတုဗေဒနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ Desensitization ကိုမကြာခဏတူညီတဲ့တုန့်ပြန်အောင်မြင်ရန်မြင့်မားထိုးသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သောသည်းခံစိတ်အဖြစ်တငျပွ။ တချို့က porn သုံးစွဲသူများ edging masturbating မဟုတ်သည့်အခါစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုအတွက်ရှာဖွေနေမှတဆင့်အစည်းအဝေးများရှည်ရှည်, အွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ Desensitization လည်းတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲများနှင့်လူစိမ်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်အသစ်ကအမျိုးအစားမှမြင့်တက်၏ပုံစံယူနိုင်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်အားလုံး dopamine ခြီးမွှောနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဆုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုများ "လေ့" ဟူသောဝေါဟာရကိုကိုသုံးပါ - ယန္တရားများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းယန္တရားများသင်ယူခြင်းပါဝင်ရသော။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (အားနည်းသောစွမ်းအား + စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းစေခြင်း) - အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်စိတ်ဆန္ဒထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချစေပြီးပိုမိုသုံးစွဲလိုသောဆန္ဒများရှိသည်။ အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များသည်သင့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအထိခိုက်ခံစွဲလမ်းများ '' ဟုတ်ကဲ့! '' ဟုအော်ဟစ်နေကြသည် မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က 'မဟုတ်ဘူး၊ နောက်တစ်ခါမဟုတ်ဘူး' လို့ပြောနေတုန်း သင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းများသည်အားနည်းသောအခြေအနေတွင်ရှိနေစဉ်စွဲလမ်းများသည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရသည်။ ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ချွတ်ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က (ပိုမိုစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ) - စွဲလမ်းမှုသည်ကျွမ်းကျင်သူများကစွဲလမ်းမှုကို ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလည်ပတ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ (cortisol နှင့် adrenaline) တို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါဟုရှုမြင်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တစ်ခုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးသောစိတ်ဖိအားကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွန်အကျွံတက်ကြွစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု impulse ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝနားလညျနိုငျအပါအဝင် prefrontal cortex နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားဆီး။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုညွှန်ပြလေ့လာရေး: 1, 2, 3.
ဤသာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပါသလား အမှတ်သည်ဤကျယ်ပြန့်ဖြီးညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီမျိုးစုံသိမ်မွေ့ထင်ဟပ် စွဲ-related ဆယ်လူလာများနှင့်ဓာတုပွောငျးလဲတစ်ကင်ဆာအကျိတ်များ၏စကင်အဖြစ် -just ဆက်စပ်သိမ်မွေ့ဆယ်လူလာ / ဓာတုအပြောင်းအလဲများကိုမပြလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသိမ်မွေ့ပြောင်းလဲမှုများအများစုမှာလိုအပ်သောနည်းပညာများများ၏ကျူးကျော်မှုကြောင့်လူ့မော်ဒယ်များအတွက်အကဲဖြတ်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့ကတိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ3အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို: ာင်း, desensitizationနှင့် hypofrontality.
ပိုများသော porn အသုံးပြုမှုအကျိုးကိုဆားကစ် (dorsal striatum) တွင်လျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စဆက်နွယ်နေကြောင်း။
ခေတ္တမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါကပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလျော့နည်းဆုလာဘ် system ကို activation ဆက်နွယ်နေကြောင်း။
ပိုများသော porn အသုံးပြုမှုအကျိုးကိုစနစ်နှင့် prefrontal cortex အကြားနှောင့်အယှက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်း။
စွဲပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှု (မူးယစ်ဆေးစွဲကိုက်ညီ) ကိုလိင်မှုဆိုင်ရာတွေကိုပိုမို prefrontal လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီထက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။
သာ. ကြီးမြတ်နှင့်ဆက်စပ်သော porn မှ porn အသုံးပြုမှု / ထိတွေ့မှု (ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း) ဝနှောင့်နှေး။ ဤသည်ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသောအကြောင်းအရာများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ မိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း၊
Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများမှနှိုင်းယှဉ်။ ာင်း (တစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြ DeltaFosb).
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလိုချင်တောင့်တခြင်း၊ ၎င်းသည်လက်ခံသည့်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည် - မက်လုံးပေးာင်း။
porn စွဲသေးသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ habituated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းအဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုရှိသည်။ pre-တည်ဆဲမဟုတ်ပါဘူး။
အငယ်တို့သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများဆုလာဘ်စင်တာအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည့် cue-သွေးဆောင် reactivity ကို။
ပိုမိုမြင့်မားသော EEG (P300) ဖတ် porn အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်ပေါ်ရာ (porn တွေကိုထိတွေ့သောအခါ အခြားအစှဲအတွက်).
ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပိုမို cue-reactivity ကိုအတူ correlating ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ။
ခေတ္တမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအနိမ့် LPP လွှဲခွင်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကိုပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: လေ့သို့မဟုတ် desensitization ဖော်ပြသည်။
အလုပ်မဖြစ် HPA ဝင်ရိုးနှင့်ပြောင်းလဲဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်, အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသော (နှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူတွဲဖက်ဖြစ်သော သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်,) ။
ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောကင်ဆာ Necrosis Factor (TNF) ၏ပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့်။
ယာယီ cortex မီးခိုးရောင်အမှု၌တစ်ဦးကလိုငွေပြမှု, ယာယီကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အခြားဒေသများအကြားဆင်းရဲတဲ့ဆက်သွယ်မှု
မတိုင်မီကအထက်ပါလေ့လာမှုများ၏ထုတ်ဝေဖို့ YBOP အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအစစ်အမှန်နှင့်အခြားစှဲတွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ အခြေခံဇီဝကမ္မဗေဒမူးယစ်ဆေးအသစ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဘာမှဖန်တီးမပေးပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤပြောဆိုချက်ကိုအတွက်ယုံကြည်မှုရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ရိုးရိုးတည်ဆဲဆယ်လူလာ functions တွေတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ကျသွားသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားစွဲ (နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမိတ်လိုက် / Bond / စျြခွငျးမတ်ေတာ circuitry) အဘို့နှင့် (ကယ်လိုရီသိုလှောင်ရာသီအဖော်ရှာ) binging များအတွက်စက်ယန္တရားဝင်စား။ ထိုမှတပါး, စွဲသုတေသနနှစ်ပေါင်းရှင်းလင်းစွာဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူ (များ၏ပုံမှန်ကြယ်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်, စွဲတစ်ခုတည်းအခွအေနေကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီသဘာဝဆုလာဘ်များ, Neuroplasticity, နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစွဲ (2011).
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများအပြင်, မျိုးစုံလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှုအကြား link တစ်ခုထုတ်ဖေါ် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်လျှော့ချဦးနှောက်ကို Activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ (လေ့လာမှုများ၏ဤစဉ်ဆက်မပြတ် updated စာရင်းကိုကြည့်ရှု) ။ ကျနော်တို့မကြာခဏဖွံ့ဖြိုးသောသူကျန်းကျန်းမာမာယောက်ျားတွေတွေ့မြင် porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ရိုးရှင်းစွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြန်သွားပါ။ ဒါကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အဘို့မှတ်ကြလိမ့်မယ်လို့အခြားကိစ္စရပ်များရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအကြံပြု
ဦးထက်ပိုသောကွောငျ့အငျတာနကျ porn အသုံးပြုသူများအပေါ်လေ့လာမှုများအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်တယ် 330 + ဦးနှောက် လေ့လာမှုတွေ ထို့အပြင် "အင်တာနက်ကိုစွဲ" ဟုဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအတည်ပြု တူညီတဲ့အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ ကြောင်းအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာကိုပိုမိုအကဲဖြတ်-based အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများဦးနှောက်လေ့လာမှုများတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုကို back up ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ collection များကိုကြည့်ရှုပါ:
ကျွန်တော်တို့၏ ပြည့်သော မကြာသေးမီ၏စုဆောင်းမှု အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး.
အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစာရင်း ဦးနှောက်ကို လေ့လာရေး
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး: Porn အကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်ပါဝင်တဲ့
အင်တာနက် & Porn အသုံးပြုမှုသရုပ်ပြလေ့လာမှုများ ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာယခုအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသီးခြား applications များသို့မဟုတ်အမျိုးအစားခွဲများအဖြစ်ရှုမြင်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်၌ကရှင်းပြသည်အဖြစ်တစ်ဦး "General အင်တာနက်စွဲ" ရှိခြင်းမဟုတ်နေစဉ်တစ်ဦးချင်းစီက Facebook သို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲနိုင်ပါတယ် စာပေဒ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်။ တစ်ဦးက 2006 ဒတျချြလေ့လာမှု erotica ပုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ အမြင့်မားဆုံးစွဲလမ်းအလားအလာ အားလုံး Internet application များ၏။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်သိသာမိတ်လိုက်ခွင့်အလမ်းများကို: အင်တာနက်ကို erotica ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုလိုက်ရန်ကြိုးနေဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်တစ်ခုအစွန်းရောက်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အစွန်းရောက် porn ဒီနေ့ရဲ့ junk အစားအစာအဖြစ် "သဘာဝစစ်ကူ" ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွင်ကြည့်ပါ porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်neuroscience အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲမှလေးစားမှုနဲ့အတူရှိရာတစ်ဦးကလက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူ, ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါး: ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity (2013) ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal လှုံ့ဆော်မှု.
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, တချို့ဦးနှောက်အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အလားအလာစွဲလမ်းသက်ရောက်မှုတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပိုမိုပြင်းထန်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမညီမမျှ-ပင်အခြေခံကျကျကျန်းမာဦးနှောက်နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအဆိုင်းဘုတ်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်သူကိုသုံးစွဲသူသည် သာ. ကြီးမြတ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာကြောင်းဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီမျိုးဆက်ယခင်တစျခုထက်ပိုလွန်ကဲဒြပ်ဆွကိုအသုံးပြုသည်နှင့် highspeed အင်တာနက်က porn နှင့်အတူအစောပိုင်းစတင်သည် (စမတ်ဖုန်းထင်။ ) အိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ကပိုများမှာ စွဲမှအားနည်းချက် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်.
"အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ" ကိုတုန့်ပြန်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအပေါ်မကြာမီကသုတေသနထုတ်ဖော်နေပါတယ် တစ်ခုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏သက်သေအထောက်အထားများ။ အကယ်. လောင်းကစားဝိုင်း, ဂိမ်းကစားခြင်း, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အစာ ဒီလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်, ကတစ်ဦးတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတတျနိုငျသကြောင်းယုံကြည်ဖို့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပြီလို မဟုတ်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့် 2011 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း (ASAM) ၏ 3000 ဆရာဝန်များ တစ်ဦးနှင့်အတူထွက်လာသ အများပြည်သူကြေညာချက် အမူအကျင့်စွဲလမ်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အစားအစာ, လောင်းကစားဝိုင်း) အခြေခံကျကျဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းရှင်းလင်းထားသည့်။ ASAM said:
"ငါတို့ရှိသမျှသည်အစားအစာနှင့်လိင်အကြိုးစေသည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာဦးနှောက်အတွက်ဤဆုလာဘ်မွတ်မပြေနိုင်သောသို့မဟုတ်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများရှိ '' အလုံအလောက်။ ' စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်မှာ circuitry တစ်ဦးချင်းစီမှသတင်းစကားတ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားမှဦးဆောင်သော '' ကိုပိုမို '' ဖြစ်လာကြောင်းအလုပ်မဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်လာသည်။ "
မေးခွန်း: စွဲ၏ဤသစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လောင်းကစားဝိုင်းပါဝင်သောစွဲ, အစားအစာ, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်းသည်။ ASAM တကယ်အစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား
အဖြေ: အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလည်းကြိုးဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေမှဆက်စပ်သည်မည်မျှဖော်ပြအသုံးပြုပုံရုံပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူစွဲ equating ကနေထွက်ခွာစေသည်။ ... ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဦးနှောက် circuitry အကြောင်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုစွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုကှာခွား။ သူကပြောပါတယ် ... အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေစွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျမှာဖော်ပြထားတဲ့ "ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား" နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ဦးကကမ္ဘာကျော်စွဲသုတေသီများနှင့် ASAM အဖွဲ့ဝင်နှစ်သစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မတိုင်မီ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုပေး၏:
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု၏ဦးခေါင်းကို (NIDA) ဆရာဝန် Nora Volkow, (ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ကျော်နှင့် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖြေရှင်းရန် "စွဲလမ်းမှု၏ရောဂါများအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု" ဟုအဆိုပါအေဂျင်စီမှရဲ့အမည်မှပြောင်းလဲအကြံပြုထားပါတယ်ပိုများသောစွဲ, Less အမည်းစက်).
စွဲသုတေသီ အဲရစ် Nestler, သူ့အပေါ်ဒီ Q & A ရှိပါတယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, Nestler Labs က။
အဖြေ: "ဒါဟာအလားတူဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကသဘာဝဆုလာဘ်, ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ် Over-စားရောဂါဗေဒ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, လိင်စွဲလမ်းနှင့်အမျှအခြေအနေများ၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုပါဝင်သောအခြားရောဂါဗေဒအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ "
သို့သော် '' porn စွဲ 'ညာဘက်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်သည်မဟုတ်လော
သငျသညျမီဒီယာကိုကြားကြပေမည်နှင့်အမျှအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) က၎င်း၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်း / compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအပါအဝင်အပေါ်ခွကေိုဆွဲထားပြီး diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ တကယ်တော့ယားဖဲကြိုးဖြတ် "hypersexual ရောဂါ" ငြင်းခုံဖို့အစားဝင်ရောက်ခြင်း၎င်း၏ 2013 ထုတ်ဝေ (DSM-5) အတွက် "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အဆုံးစွန်သောထီးသက်တမ်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနှစ်ပြီးနောက် DSM-5 ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်လုပ်ငန်း Group ကထည့်သွင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ဦးဒသမနာရီ "ကြယ်ပွင့်အခန်းထဲက" session တစ်ခု (ကသူ Work Group မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဆိုအရ) တွင်အခြား DSM-5 အရာရှိများတဖက်သတ်ယုတ္တိမတန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကိုးကားပြီး hypersexuality ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ "အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ" ၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုအကြံပြုဖို့ကျဆင်းနေစဉ်ဥပမာ, DSM-5 ", အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder 'အင်တာနက်စွဲလမ်းမျိုးကွဲများ၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုအကြံပြုခဲ့သည်။
ဒီအနေအထားကိုရောက်ရှိမှာ DSM-5 ခံစားနေရသူနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့စွဲနှင့်ကိုက်ညီအပြုအမူတွေနှင့်စွဲဆေးပညာ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သုတေသနကျွမ်းကျင်သူများကထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏တရားဝင်ထောက်ခံချက်သူတို့ရဲ့ Clinician ၏ကျယ်ပြန့်သည့်အစီရင်ခံစာများနှစ်ဦးစလုံးမှတ်။ သမိုင်းတစ်နည်းနည်း: အ DSM ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသီအိုရီလျစ်လျူရှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအတွက်၎င်း၏ diagnoses grounding (ထက်ဇီဝြဖစ်စဉ်အခြေခံ) ၏ယင်း၏ချဉ်းကပ်ရန်ကန့်ကွက်သူအချို့ပုံမှန်ဝေဖန်သူများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်အန်တုအချို့အပြောင်းအလဲမြန်, နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ရလဒ်များ။ ဥပမာ, တခါမှားယွင်းစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းခွဲခြား။
ရုံကြိုတင်5အတွက် DSM-2013 ရဲ့ထုတ်ဝေဖို့, ဒါရိုက်တာစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute ၏သောမတ်စ် Insel သတိပေးခဲ့သည် က DSM အပေါ်မှီခိုရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကျန်းမာရေးလယ်ကွင်းများအတွက်အချိန်ခဲ့တာ။ အဆိုပါ DSM ရဲ့ "အားနည်းခြင်းတရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်"ဟုသူကရှင်းပြသည်နှင့်"ကျနော်တို့က "ရွှေကိုစံအဖြစ် DSM အမျိုးအစားကိုသုံးပါလျှင်အောင်မြင်မနိုင်။ "သူကဆက်ပြောသည်"NIMH ကွာ DSM categories မှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ "အခြားစကားများထဲမှာ, NIMH မဟုတ်တော့ DSM အတွက်စာရင်း diagnoses အပေါ်အခြေခံပြီးသုတေသနရန်ပုံငွေလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ DSM-5 ရဲ့ထုတ်ဝေ, ရာပေါင်းများစွာကိုပိုပြီးအင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲလေ့လာမှုများကတည်းကနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလေ့လာမှုများများစွာအဆိုပါ DSM-5 ရဲ့အနေအထားကို undercut ထွက်လာကြပြီ။ စကားမစပ်, အ DSM-5 ရဲ့ရပ်တည်ချက်မှမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုရှိနေသော်လည်းပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူသူတို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်တဲ့သူယောဂီထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများရှာဖွေရေးမှာဆက်လက်ပါပြီ။ သူတို့ဟာ employ အခြားဟာ DSM-5 အတွက်ရောဂါအဖြစ်လက်ရှိ ICD-10 ကနေတစျခုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့အဖြေရှာတဲ့လက်စွဲစာအုပ်သည် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး.
အဆိုပါကြီးတွေသတင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အဆိုပါ DSM-5 ရဲ့အမှားတညျ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DSM-5 အယ်ဒီတာများနှင့်မတူဘဲ, အ ICD-11 ၏အယ်ဒီတာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေသက်ဆိုင်သောမမှန်ရှိသူများပတ်ဝိုင်းမယ်လို့အသစ်တစ်ခုစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါပေါင်းထည့်ရန်တင်ပြသည်။ ဤတွင်ရဲ့ လက်ရှိအဆိုပြုထားဘာသာစကား:
6C92 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်တဲ့ဇွဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့တိုကျတှနျးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးစီးပွား, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တာဝန်များလျစ်လျူရှုထား၏အချက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝများ၏ဗဟိုအာရုံဖြစ်လာထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါသည်မည် သိသိသာသာထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလျှော့ချရန်မြောက်မြားစွာမအောင်မြင်အားထုတ်မှု; နှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ကနေအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမစိတ်ကျေနပ်မှု deriving ရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ပြောသည်။ ပြင်းထန်သော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်တိုကျတှနျးထားသနှင့်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရရှိလာတဲ့၏ပုံစံ, အချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ (ဥပမာ6လအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ကျော်ထင်ရှားနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစုအတွက်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်, လူမှုရေး, ပညာရေးဖြစ်ပါသည် လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကအခြားအရေးကြီးသောဒေသများ။ ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြမြားမှလုံးဝဆက်စပ်သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေအကြောင်းကိုမရရှိခြင်း၏ဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ။
အဆိုပါ ICD-11 တစ်ခုတိကျမှန်ကန်အကောင့်များအတွက်, လိင်ကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) သည်အသုံးပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွငျ့ဤမကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေ့မြင်: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" စိတ်ကျန်းမာရေး Disorder အဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တို့ကခွဲခြားထားသည်။ တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်, အစီအစဉ်-မောင်းနှင်ပါရဂူဘွဲ့ရဲ့အားဖြင့် shenanigans အပေါ်ဖော်ထုတ်ဘို့ - Propagandists WHO ကရဲ့ ICD-11 "porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲပယ်ချ" အဲဒီမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်ကိုလောင်စာစာတမ်းများရှေ့နောက်မ
အပိုင်း ၂။ မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများကိုဝေဖန်ခြင်း၊ ဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း debunking
ဆိုက်၏ဤအပိုင်း YBOP နှင့်အခြားသူများသံသယရှိသည်သောအကြောင်းကိုဝေဖန်မှုလေ့လာမှုများပေးပါသည်။ အချို့မှာနည်းစနစ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်။ အခြားသူတွေမှာကောက်ချက်မလုံလောက်ထောက်ခံပေါ်လာပါသည်။ အခြားသူတွေများတွင်အသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရများအမှန်တကယ်လေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုပေးထားလှည့်စားနေသည်။ တချို့ကကလုံးဝအစစ်အမှန်တွေ့ရှိချက်ရှေ့နောက်မ။ အများဆုံးစာတမ်းများအဘို့, လေ့လာမှုတစ်ခုခေါင်းစဉ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းကတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုက်ရိုက်သင်ကြာပါသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်သင်သည်မူရင်းစာတမ်းများမှလင့်များရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှုများ၏ဝေဖန်မှုများအပြင်အနည်းငယ်ရွေးချယ်ထားသည့်ဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း debunked နေကြသည်။ (သင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအလည်အပတ်မှသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများရှာနေနေတယ်ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာ.)
YBOP ဒီရေးသားခဲ့သည်စာနယ်ဇင်းများတွင်ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးပြန့်ပွားတုံ့ပြန်: ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ 2015 တစ်ဒါဇင်ကျော် porn စွဲ (ဧပြီ, 3) ထောက်ပံ့အာရုံကြောလေ့လာမှုများချန်လှပ်စဉ် 2016, (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ)။ နီးပါးတိုင်းပြောနေတာမှတ်နှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု debunking အဘို့ဤကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ သငျသညျသုတေသီများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါများကိုမြင်ရသဖြင့်ရရှိစေရန်အတွက်ဒဏ္ဍာရီများစွာကိုဖြေရှင်းရိုးရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုကငျြတယျဆိုရငျ: (ဗီဒီယို) porn ဒဏ္ဍာရီ - ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်စွဲလမ်းပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား,။ (Vimeo အပေါ်) တွင်အောက်ပါဆွေးနွေးပွဲတွေ 2018 NCOSE conference မှာတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်:
ယာကုပ်အမျိုးကိုဟက်ခြင်းဖြင့် "သူတို့ကဒါဟာကြည့်ရှုပါတဲ့အခါမှာပြည်သူ့ Porn-သိပ္ပံဝါဒဖွနျ့အသိအမှတ်ပြု" - အလုပ်နည်းဗျူဟာတစ်ခုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် "astroturfers" က porn ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသူကိုငြင်းဆိုသည်။
ဂယ်ရီ Wilson က - "Porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?"- Wilson က5လေ့လာမှုများနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ propagandists porn စွဲမတည်ရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ် porn အသုံးပြုမှုကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုကြောင်း၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့ (အားလုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ကိုးကား။
ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာ Published မှတ်ချက်အ
အယ်ဒီတာမှပေးစာ: များ၏ဝေဖန်မှု "Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" (2016), နီကိုးလ် Prause, Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley, ဒင်း Sabatinelli, Greg Hajcake
ကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားများမရှိ။ 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲမှု' (၂၀၁၄)၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဒေးဗစ်လလေ၊ နီကိုးလ်ပရာဇ်နှင့်ပီတာဖင်နေး (ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်)Ley et al။ , 2014)
porn နှင့်လိင်စွဲဆန့်ကျင်သည် "အုပ်စုတစ်စုအနေအထား" စက္ကူ (နိုဝင်ဘာ, 2017) ဖျက်သိမ်းရေး
လေ့လာခြင်း ( "ဒေတာများကိုစွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူး"Prause et al။ , 2017)
နီကိုးလ် Prause ရဲ့ဝေဖန်မှု (2019) "Porn တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ရှိ၏"
အဆိုပါယောရှုသည် Grubbs CPUI-9 နှင့်ဒါခေါ် "ခံစားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ"
ယောရှုသည် Grubbs သူ၏ "ရိပ်မိ porn စွဲ" သုတေသနနှင့်အတူငါတို့မျက်မှောက်ကျော်သိုးမွှေးဆွဲသလဲ? (2016)
2018: သုတေသန Grubbs, ပယ်ရီ, အလိုရှိ Reid ပြန်လည်သုံးသပ် disingenuous ဖြစ်ပါသည် ( "တစ်ဦးစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူအရေးပါသောမော်ဒယ်ကငျြ့တရား Incongruence ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပြဿနာများ") အကြံပြု။ “ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြ:နာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis လုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ” (၂၀၁၈) ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုများ (သုတေသီများမှ)
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် Unipathway ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို (၁၉၈၈) Paul J. Wright ကတင်ပြခဲ့သည်
Brian J. Willoughby က Porn Box (2018) တွင်ကပ်ထားခဲ့သည်
Sharg W. Kraus & Patricia J. Sweeney တို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပြProbleနာကိုအသုံးပြုရန်တစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြonနာများအတွက်သီအိုရီယူဆချက်များ -“ အခြေအနေ” နှစ်ခုသည်သီအိုရီအရအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကွဲပြားပါသလား။ (2018) Matthias Brand, Stephanie Antons, Elisa Wegmann, Marc N. Potenza ကပြုလုပ်သည်
လေ့လာမှုအသစ် "ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲ (9) ဖြစ်စေအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုတူရိယာအဖြစ် Grubbs CPUI-2017 invalidates
ဘာသာရေးပြည်သူ့အသုံးပြုမှုနည်း Porn နှင့်အဘယ်သူမျှမပိုသူတို့ကစွဲနေ (2017) ယုံဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏
"ပျက်ဆီးနေသောကုန်စည်: များ၏ဝေဖန်မှုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးတော့ပူပန်အကြားတွင်တစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အမြင်" (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2017)
စွဲလမ်းအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်း (2015) ကိုရိပ်မိစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏, Grubbs JB, Exline JJ, Pargament KI, Hook ဖြစ်မှု, Carlisle တို့ RD ။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှရိပ်မိစွဲ: တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါနှင့်ကျော်အချိန် (2015)။ Grubbs JB, Stauner N ကို, Exline JJ, Pargament KI, Lindberg MJ ။
Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုရှိပါသနည်း
နှစ်ဦးက Highly ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာရေး
1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, မ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် (သံမဏိ et al ။ , 2013) ။ Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley တိမောသေ Fong သည်, နီကိုးလ် Prause
၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - "တစ်ဝေဖန်မှုသံမဏိ et al ။ , 2013 ": အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက် porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: 'အမြင့် Desire' သို့မဟုတ် 'ရုံ' 'တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al ။ Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD အားဖြင့် (2014) ။
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု" (2014)
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို" (2015)
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေအငျတာနကျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလား? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ "(2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "Emotion မသိနှင့် Non သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား?" (2017)
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအတွက် Neurocognitive ယန္တရားများ" (2018)
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: "အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်" (2019)
သတင်းမှားမီဒီယာဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အတုအယောင်လိင်စွဲလမ်းလေ့လာ, (2013) Robert Weiss, LCSW & Stefanie Carnes PhD မှ
Hypersexuality ကြောင့် Call မနေပါနဲ့ကိုငါတို့သ Term လိင်စွဲလမ်းလိုအပ်အဘယ်ကြောင့်Linda Hatch, Ph.D အားဖြင့်, (2013)
အဆိုပါအတုအယောင်လိင်စွဲလမ်း "အငြင်းပွားမှု" နှင့်အဝိဇ္ဇာ၏ Purveyors Linda Hatch, Ph.D အားဖြင့် (2014)
ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့အပေါ် သံမဏိ et al ။, 2013 (နှင့်ဂျွန်ဆင်ကသူ့အောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause ဆွေးနွေး စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဆောင်းပါး)
လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟူသောအဆိုကိုလေ့လာမှုများကမှားယွင်းစေသည်။
ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့် "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ 2) Modulation (Prause et al ။ , 2015) ။ နီကိုးလ် Prause, Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley, ဒင်း Sabatinelli, Greg Hajcake
၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
'' Porn စွဲ '' နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Modulation "၏ YBOP ဝေဖန်မှု (Prause et al ။, 2015) "
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: စွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်နိုင်သည်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် LPP လျော့နည်းသွားသည်။ အရာအားလုံး (2016) ကိုမော်ဒယ်ပေါ်မူတည်
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016)
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော (2016)
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေပါသလား လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: Emotion မသိနှင့် Non သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017)
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)-တစ်ဦးက Don't
porn Related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်
"မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း" (Prause & Pfaus, 2015) ။ နီကိုးလ် Prause & Jim Pfaus:
၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု ချီးမွမ်း & Pfaus, 2015 - ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Prause & Pfaus ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည် Richard A. Isenberg (“အနီရောင် Herring: Hook, လိုင်းနှင့် Stinker")
အဘယ်အရာကိုမျှသံသယရှိလေ့လာမှုအတွက် Up ကိုထည့်: လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်ကျအောကျခံ '' ED လက်ဝဲ Unexplained - တစ်ဝေဖန်မှု ချီးမွမ်း & Pfaus, 2015 - ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်: လိင်အလုပ်မဖြစ်စေအငျတာနကျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလား? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Porn အပေါ်နယူးလေ့လာမှုနှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်လင်ဒါ Hatch Ph.D (2015) ကတစ်ဦးဖယောင်းရုပ် Banana [အတုအသီး] ဖြစ်ပါတယ်
Stefanie Carnes Ph.D (2015) က ED နှင့် Porn အသုံးပြုမှုအပြီးအပြတ်ကောက်၏အလုပ်ချိန်အပေါ်နယူးသုတေသန
"babyish အသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူ Associated နှင့်အလုပ်မဖြစ် Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားသလား" ၏ဝေဖန်မှု (2015), အိုင်ဗင် Landripet, Aleksandar Štulhofer
"ပေါ်တွင် CommentYounger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? "Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
ဗြိတိန်မှာ 16 နှစ်အရွယ် (21) မှ 2016- အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်
အထွေထွေ Erectile လူငယ်တို့, လုပ်ပါကဘယ်သူလဲလိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မလုပ်ဆောင်အစီရင်ခံစာကွန်ဒုံး-Associated စိုက်ထူပြဿနာများ (CAEP) (2015) အကြားလည်ပတ်
Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2016), စာရာသည် Blais-Lecours, Marie-ဆိပ်ခံတံတား Vaillancourt-Morel, Stephan Sabourin, Natacha Godbout
Cyberpornography အသုံးပြုမှုနှင့်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပြီ-ခံ (2017) ၏ profiles Marie-ဆိပ်ခံတံတား Vaillancourt-Morel စာရာ Blais-Lecours, Chloe Labadie, ဆိုဖီ Bergeron, Stephan Sabourin, Natacha Godbout
Erectile အလုပ်မဖြစ်၏အကဲဖြတ်ဘို့စောင့်ရှောက် Model ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရန် 2018 တည်းဖြတ်မူ (2018), Viagra (Pfizer) ၏ထုတ်လုပ်သူကပေးဆောင်
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al ။, 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း
"Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား၏ဝေဖန်မှု Cross-Section နှင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019) မှစ. ရလဒ်များ
တေလာ Kohut လေ့လာရေး
“ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စုံတွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးသူများ၊ အောက်ခြေမှတက်သည့်သုတေသနများ” ၏ဝေဖန်မှု၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ လန်းကမ့်ဘဲလ်
"babyish အမျိုးသမီးများနေ့မှအမုန်းတရားပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုတကယ် Is ၏ဝေဖန်မှု? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016), တေလာ Kohut, ဂျိုဒီအယ်လ် Baer, ​​Brendan Watts အတွက် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကို Hold
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (2008), Hald GM က, Malamuth မိုင် (ထို PCES) ၏ self-ခံစားသက်ရောက်မှု
ဂယ်ရီ Wilson က (7 မိနစ်ဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်) အားဖြင့် "babyish စားသုံးမှု Effect စကေး" ၏ဝေဖန်မှု,
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းကိုသက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုလိင်တူချစ်သူများအားတင်ပြခြင်း (၂၀၁၃)၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်၊ ကင်မရွန်စထလီနှင့်တိမောသေဒဗလျူဖောင်တို့။
ပွုလုပျခွငျးရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒတ်ခ်ျပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများ (2013) ၏အကြီးစားနမူနာ, Gert မာတင် Hald, Lisette Kuyper, Philippe CG အာဒံ, ယောဟနျသ BF က de ကျေးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားတွင်အသင်းအကဲဖြတ်။
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသမီး vibrator အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများ: တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှု (2009) မှရလဒ်များကို, Herbenick: D, Reece M က, Sanders က S, Dodge B, Ghassemi တစ်ဦးက, Fortenberry JD ။
သြစတြေးလျရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - ဒုတိယနှင့်Australianစတြေးလျကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၁၆)၊ Chris Rissel၊ Juliet Richters, Richard O. de Visser, Alan McKee, Anna Yeung & Theresa Caruana
erotica ထိတွေ့ယောက်ျားအတွက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းလျှော့ချပါသလား? Kenrick, Gutierres နှင့် Goldberg (1989) လေ့လာမှု2(2017) Balzarini RN, Dobson, K. , ချင်း, K. နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, အယ်လ်၏လွတ်လပ်သောပွား
လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ (SEM): Comparing SEM မှလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် (2017) ရဲ့တစ်ဖက်မှာ, Hald, Stulhofer, Lang ။
ရှမွေလသည် Perry ရဲ့များ၏ဝေဖန်မှု "babyish အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းတကယ်ပဲပိုကြား Link ကိုလား? နှစ်ဦးအမျိုးသားစစ်တမ်းများ "(2019) မှစ. ရလဒ်များ။
"ခက်နှင့်ခက်ခဲ၏ဝေဖန်မှု? အဓိကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပိုမိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်လာခြင်းနှင့် Do ကြည့်ရှုသူများသည်အကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာဦးစားပေး? "(2018) ဖြစ်ပါသည်.
'' Porn လေ့လာရေးဂျာနယ် 'Fiona Attwood နှင့် Clarissa စမစ် (2013) ။
Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ Related ဆောင်းပါးများ lay
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန် - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုနှင့်ဂယ်ရီဝီလ်ဆင် (Marty Klein) ကိုတုန့်ပြန်မှု (သင်၏ man ၀ န်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်) (guardပြီ၊ ၂၀၁၆)
Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်
(2017) "Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခက်အမှန်တရား" Kris တေလာရဲ့ Debunking
"သင် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပူဖြစ်သင့်သလဲ" Debunking - The Daily Dot ရဲ့ကို Claire Down ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2018)
"လွန်း Porn အကဲခတ်နိုင်သည်ကိုသင် Erectile အလုပ်မဖြစ် Give?" (2018): Gavin အီဗန်အားဖြင့် "အမျိုးသားများရဲ့ကနျြးမာရေး" ဆောင်းပါး Debunking
(2018) "လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်ထအပေါ်တကယ်ပဲသည် Erectile အလုပ်မဖြစ်" ကို Justin Lehmiller ရဲ့ Debunking
Porn သုံးစွဲမှုစက်လှေကားမှ Related ဆောင်းပါးများ lay
ပြန်လည်စဉ်းစား Ogas နှင့် Gaddam ရဲ့ '' တစ်ဦးဘီလီယံဆိုး Thoughts '(2012)
'' တစ်ဦးဘီလီယံဆိုး Thoughts '' သာလျှင်တစ်ဦးကလျှပ်တစ်ပြက် Is: longitudinal လေ့လာမှုများ porn အရသာ morphing (2012) ထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုအပ်
လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများအတွက်စက်လှေကား (နှင့်လေ့) ကိုရှာပါ
နှစ်ခုနီကိုးလ် Prause Op-Ed ရဲ့ပစ်မှတ် Debunking သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်
Op-Ed: Utah ကျောင်းသားများကိုအစစ်အမှန်လိင် ed နဲ့ 'အသစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်' (2016) လိုအပ်ပါတယ်
Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)
"Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေပါသလား?"မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က
ဒွန်ဟီလ်တန်, MD အားဖြင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2017) အကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း
မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့် (2018) လျစ်လျူရှု
Propagandists "WHO ကရဲ့ ICD-11" porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲပယ်ချ "အဲဒီမှားယွင်းသောအရေးဆိုမှု (11) လောင်စာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့် ICD-2018 ရှာဖွေရေး features တွေရှေ့နောက်မ
ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo ဒါဝိဒ် Ley ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖျက်သိမ်းရေး: "ကျနော်တို့ porn စကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ကောင်းသောသိပ္ပံအပေါ်အားကိုးရမယ်"(မတ်လ, 2016)
ဂျင်မ် Pfaus ရဲ့ "မှ YBOP တုံ့ပြန်မှုသိပ္ပံပညာရှင်ယုံကြည်စိတ်ချ: လိင်စွဲလမ်းနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည်"(ဇန်နဝါရီ, 2016)
တစ်ဦးသည်ဒါဝိဒ် Ley မှတ်ချက် (ဇန်နဝါရီ, 2016) တွင်တောင်းဆိုမှုများမှ YBOP တုံ့ပြန်မှု
ဒါဝိဒ်သည် Ley အဆိုပါ NoFap လှုပ်ရှားမှု (မေလ, 2015) တိုက်ခိုက်မှု
"ပေါ်တွင် Commentaryကြှနျုပျတို့စွဲအကြောင်းသိပါစဉ်းစားပါအရာအားလုံးမှား - အတိုချုပ်ပြောရရင်"(Johann Hari)